Warhammer Odyssey bụ ụlọ akwụkwọ ochie MMORPG maka gam akporo | Gam akporosis
Warhammer odyssey eỌ dịlarị na mpaghara ma anyị nwere ike ịsị na ọ bụ "ụlọ akwụkwọ ochie" MMORPG nke enweghị ọgụ na-akpaghị aka na enweghị ụgwọ iji merie ma ọ bụ yiri ya. N'aka ozo, dika World of Warcraft nke were ocheeze MMO afọ gara aga.
N'oge mgbe ndị MMO niile ahụ dakwasịrị n'ahịa ahụ bụ ọgụ na-akpaghị aka yana yana ọrụ ndị ọzọ nke anyị na-eji oge ka ukwuu na-aga site na cinematics, Virtual Realms na-egwu ya iji nye anyị ekpomeekpo nke ụnyaahụ mgbe anyị ga-egbu puku kwuru puku "mobs" ma ọ bụ NPCs (Ndị Na-adịghị Ejikwa Player) larịị ma si otú a nweta ihe kachasị mma ma bụrụ ndị nke kachasị ike n'ụwa. Ka anyi jiri oji a mara nma bia ya.
1 MMORPG ụlọ akwụkwọ ochie
2 Worldwa na-adịgide adịgide na Warhammer Odyssey
3 Nyochaa World Old World na Warhammer Odyssey
MMORPG ụlọ akwụkwọ ochie
Maka ndị na-achọghị ndidi site na Runescape (Ọ bụ ezie na ọ bụ MMORPG, ọ nweghị ụdị eserese a pụrụ iche), na ha choro i chere ihe MMORPG bu ulo akwukwo ochie, Warhammer Odyssey bụ onyinye kachasị mma nke onyinye dị ugbu a. Na eziokwu na ọbụlagodi na ọ bụ Warhammer na-enye ya ike pụrụ iche.
Si anyị pụtara na ụlọ akwụkwọ ochie bụ maka ihe dị mfe ịkọwa: ebe a ị na-achịkwa onye agha gị dị ike nke nwere njikwa na onwe gị i nwere na pịa ntuziaka ọgụ ma ọ bụ ikike ndị ahụ anyị nwere ike ikenye onwe anyị na njikwa ihuenyo.
ORlọ akwụkwọ ochie MMORPG na kedu rute n'ọkwa dị oke elu dị ka usoro. Maka oge anyị na-egwuri egwu, anyị ahụghị lag ọ bụla ma na anya ọ dị mma na ọkwa niile. Ọbụna ndị egwuregwu gbara anyị gburugburu na-arụ ọrụ ha ma gbuo NPCs.
Worldwa na-adịgide adịgide na Warhammer Odyssey
Ma nke ahụ bụ Warhammer Odyssey biara ibute oghere di egwu nke udiri MMORPG a; ọ bụ ezie na-ekwu na ezi mmetụta Genshin ọ nwere ike ịbanye na ya, mana ọ dị anya na nke ahụ na-adịgide adịgide ma nwee naanị ihe na-akwado. N'ebe a na Oddisey anyị ga-eche na anyị bụ akụkụ nke obodo ndị egwuregwu site na eserese anyị ga-ezute ndị egwuregwu si ebe a gaa ebe ahụ.
Kwute ya ọbụna map ndị sara mbara ma anyị nwere ole na ole ibu mgbe anyị gafere ọkwa ma mara ntakịrị ihe banyere egwuregwu ịntanetị a na-akpọ Warhammer Odyssey. Na ngụkọta anyị nwere usoro nke klas 6 na ọkachamara 12. N'ebe anyị nọ, anyị ahọrọla onye agha bụ Monk nke na-ewepụta ọra ndị dị egwu ka ọbụlagodi ndị otu ya nwere ike iji ya.
Obodo Virtual etinyewo anụ niile na imi ihe iji kpọpụta azụmahịa pụrụ iche, yabụ anyị ghọtara na akụkụ nke ọrụ aka na "nka" ga-abụ isi mmewere nke mere na anyị ga-eme ka akpakọba anyị maa akụ anyị wee gaa n'akụkụ akụ nke obodo dwarves ma hapụ mkpụrụ ego anyị.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ebe a na ọ bụ ihe niile ntuziaka, ihe Otu ihe ahụ na-eme na nkà na isi mmalite nke agwa ahụ na anyị nwere ike itinye. N'ezie, maka ndị na-achọghị iri isi ha ọtụtụ, ha nwere nhọrọ nke ekenye ha na akpaghị aka dịka klaasị ahọrọ.
Nyochaa World Old World na Warhammer Odyssey
Ọ bụrụ na anyị nọ n'ihu ụwa ogologo oge anyị na ndị ọzọ na-egwuri egwuNke a pụtara na anyị ga-enwe ike isonye na ntanetị na-ekwenye ekwenye iji nwekwuo ọ enjoyụ karịa na ihe anyị nwetara ga-eweta ụlọ nkịrịka ụlọ akwụkwọ dị ọcha «ochie akwụkwọ». Anyị ahụbeghị mkpọtụ PvP ọ bụla, mana ihe niile yiri ka ọ na-egosi, dị ka Warhammer Online afọ ndị gara aga, nke anyị nwere ike ịnwe ezigbo oge na MMO nke a ga-emelite na ọdịnaya ọhụrụ.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere eserese na teknuzu akụkụ, eziokwu bụ na ọrụ mere bụ enviable nke mere na ọbụlagodi na ọkwa dị ala anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụfọdụ ọrụ ya na mmegharị ahụ emepụtara nke ọma. Dị ka gburugburu, obodo, ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ndị ahụ dị iche iche akọwapụtara nke ọma na-enye gị nnukwu ahụmịhe egwuregwu. Nke bụ eziokwu bụ na ọ hapụrụ ezigbo uto n'ọnụ anyị.
Ugbu a maka ndị a na-eji egwu nkeji ise egwu egwu, ha ga-achọta egwuregwu na-anaghị atọ ụtọ. Ndi ozo anyị na-eche ihu MMORPG chọrọ ka anyị gbuo ọtụtụ ndị iro ma mee ọtụtụ ọrụ ịkwado; obughi ngwa ngwa dika egwuregwu ndi ozo na na nkeji nkeji anyị nwere ọkwa 10; akaebe nke a bụ Bless Mobile. N'ebe a Warhammer Oddisey ga - ahụ agha nke aka ya na nke kachasị n'ihi ọnọdụ dị ugbu a na egwuregwu dị iche iche n'ịntanetị ọtụtụ.
Lo Ọ bụ eziokwu na n'oge anyị gbara egwu, anyị zutere ọtụtụ ndị egwuregwu na Warhammer Odyssey , yabụ ịbụ mbido mpaghara, ọ dị ka a ga-atụkwasị ọtụtụ ndị egwuregwu ntakịrị ntakịrị. Ọ bụrụ n’inwere ezigbo mkpanaka, anyị na-akwado ka ị budata ya, ebe ọ bụ na anyị anaghị enwe nhọrọ ịme egwuregwu MMORPG nke ụlọ akwụkwọ ochie. Lee, anyị nwere otu maka ezigbo oge.
Otu MMORPG na-amasị anyị ụlọ akwụkwọ ochie, ụwa na-anọgidesi ike, ọtụtụ egwuregwu, ezigbo eserese, ọgụ aka na ọtụtụ awa n'ihu na gburugburu gburugburu na mbara igwe Warhammer na aka anyị.
Usoro edemede: 7,6
Ọmarịcha eserese mara mma nke nwere ihu igwe dị ịtụnanya
Anyị na-atụ uche inwe ike ijikwa onye agha anyị aka ma wakpo onwe anyị
Ọnọdụ ndị e kere na mbara igwe Warhammer
Mmetụta eserese na arụmọrụ dị mma
Istwa na-adịgide adịgide na ọtụtụ ndị egwuregwu
N'oge a ọ bụghị n'asụsụ Spanish, mana ọ ga-abịa dị ka ọ dị na beta
Developer: Obodo mebere
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Warhammer Odyssey bụ 'ụlọ akwụkwọ ochie' MMORPG na-enweghị ọgụ na-akpaghị aka ma dị egwu na visuals
Echere m na ọ ka dị na Spanish ... Enwere ozi na a ga-atụgharị ya n'oge na-adịghị anya?